DISTRIKAN’AMBATOFINANDRAHANA : Hisitraka an’ireo tetikasan’ny Filoha
Isan’ireo Distrika hisitraka ny fahatanterahan’ireo tetikasa goavana sy velirano nataon’ny Filoha Andry Rajoelina ny vahoakan’Ambatofinandrahana. 19 août 2019
Maro ireo vinan’asa hatao ao anatin’ity Distrika ity izay mipaka avy hatrany amin’ny filàn’ny mponina eo amin’ny fiainany andavanandro ary miantoka betsaka ny fampandrosoana ny fiainan’izy ireo ihany koa. Tafiditra ao anatin’izany ny fanamboarana ny lalam-pirenena laharana faha-35. Ankoatra ireo hahazo tombony amin’ny famatsiana avy amin’ilay tetikasa Fihariana ihany koa ireo tanora ao an-toerana, ka heverina ny hiroboroboan’ny fandraharahana ao anatin’ny fotoana fohy.
Ny Distrikan’ Ambatofinandrahana dia anisan’ireo faritra manana velaran-tany midadasika, manana harena an-kibon’ny tany tsy manam-paharoa maneran-tany ihany koa. Tetikasa hotanterahina any an-toerana. Ireo no trandrahina hanomezana tombontsoa ho an’ny mponina. Hohatsaraina ny sehatry ny fambolena sy fiompiana ary haverina hosokafana ihany koa ny orinasa Magrama mba hiteraka asa ho an’ireo tanora. “Hisitraka izahay an’ilay tena hoe fiovana.
Hisitraka izany fitaovana hanaovana fambolena manara-penitra izany ny vahoakan’Ambatofinandrahana. Eo ihany koa ny lalam-pirenena faha-35 izay tetikasan’ny Filoham-pirenena, ka mba tokony tsy hatao lavitra ny hanatanterahana azy. Ankoatra izay dia fantatra amin’ny harena an-kibon’ny tany Ambatofinandrahana. Ao ny Kristaly, ny Marbe, ny Malakita.
Hosokafana ny Magrama satria izay no mba hiteraka asa ho an’ireo tanora ireo. Hisy ny famatsiam-bola Fihariana izay hataon’ny Filohan’ny Repoblika fa ambonin’izay dia hahazo famatsiam-bola ny tanora amin’ny fisokafan’ny ozinina antsika izany” , hoy ny filohan’ny Antenimieram-pirenena Razanamahasoa Christine. Tsy ho ambanin-javatra ihany koa ny fanatsarana ny lafiny ara-tsosialin’ny mponina. Hisy ny fandaharan’asa ho an’ny fahasalamana amin’ny alalan’ny fananganana hopitaly, ny fananganana Kaominina vaovao ary ny kianja manara-penitra izay tafiditra ao anatin’ireo fanamby isam-paritra nataon’ny Filoham-pirenena. “Hisy ihany koa ny fandaharan’asa maromaro ho azontsika aty Ambatofinandrahana. Mahazo hopitaly CSB I ireo toerana tsy mbola nanana izany, hisy ihany koa ny fanamboarana kianja manara-penitra ary ny hananganana Kaominina”, hoy hatrany ny lahateniny.